YK-11 Cycle na Nleghachi Nlele site n'aka Ndị Ọrụ Nlekọta
1. Kedu ihe bụ YK-11?
2. Kedu ka YK-11 si arụ ọrụ?
3. Iji YK-11 tụnyere Testosterone
4. Kedu uru ndị a ga-atụ anya na YK-11?
5. YK-11 Ihe ize ndụ mgbe eji
6. Kedu ka o si dị mma maka ịkpụ ahụ?
7. Ònye nwere ike iji YK-11?
8. Nke kachasị mma YK-11
9. YK-11 ọkara ndụ
10. Kedu ihe ntụgharị usoro nke YK-11 dị?
11. Ihe YK-11
12. YK-11 nyocha site na ezigbo ndị ọrụ
13. YK-11 tupu na mgbe o jiri ya
14. Ebe ịzụta SARM YK-11 (YK-11 maka ire ere)
1. Gịnị bụ YK-11?
A na-ekewa YK-11 n'okpuru (SARM) Họrọ Androgen Receptor Modulators. Yuichito Kanno, onye sayensi, chọpụtara SARM YK-11 na 2011. Site nyocha ya, o kwadoro na onyinye a bụ SARM. YK-11 (431579-34-9) usoro iheomume yiri nke steroid. Mmetụta ya yiri nke ndị ọzọ steroid ma na-enwe mmetụta dị njọ ntakịrị. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na YK-11 bụ steroid. Enweghị mmetụta ọ bụla na prostate, onyinye a nwere ike ịkpalite ntutu isi na ahụ. Otutu nke ngwaahịa a nwere ike ime ka mmegide na-emezi ihe ziri ezi. Ọ bụ onye na-enweta ihe na-eme ka etrogen na-enyekwa aka n'otu ikike dịka ndị nabatara ndị ọzọ androgen.YK-11 na-ejikọta aka na androgen receptor nhọrọ na ọkpụkpụ na anụ ahụ. Nke a na - ebubata mmepe nke ngwongwo ahụ. Ndị ọrụ YK-11 SARM nwere ike ịnweta ọganihu siri ike ọ bụla n'ihi ikike nke onye ahụ nwere ike ịhọrọ.
Dị ka nyocha, YK-11, ruo n'ókè ụfọdụ bụ onye na-egbochi ihe mgbochi n'ihi na ọ nwere ike belata ọrụ m. Myostatin bụ protein nke arụpụtara ma wepụta ya. N'ọtụtụ buru ibu, a na-akpọ protein ndị a dị ka myokines. Mkpụrụ ahụ nwere ike ịhapụ ndị na-edozi ahụ na-ebute igbochi ahụ ike. Dịka, a na-ahapụ ha mgbe ha na-ebuli elu mgbe ha mejisịrị nke sel ahụ. YK-11, ịbụ onye na-eme ihe na-emetụta ihe mgbochi, na-ebelata ihe mgbochi nke na-ekesa n'ime ahụ na-ekwe ka onye ọrụ ahụ nwee ike ịmalite ikpo ọkụ ahụ na-adị mfe n'oge usoro mgbagwoju anya.
N'etiti ọtụtụ SARM dịnụ, YK-11 bụ otu kachasị mma n'ebe ahụ. N'iji YK tụnyere SARM ndị ọzọ dịka LGD-4033, ọ ga-abụ na n'elu ndepụta ahụ. Ọ bụ ezie na a nyochaa ntakịrị ihe iji kwado na YK-11 bụ ike. Maka nke a, ọtụtụ arụmọrụ nke na-eme ka ndị ọrụ karịa iji SARM dị ka RAD-140, GW-501516 ma ọ bụ Ostamuscle.
2. Kedu ka YK-11 -arụ ọrụ?
SARM YK-11 ejiri aka na androgen na ahu. Omume a na-eme ka ọnọdụ nke ana-emepụta mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ ndụ muscle mepụtara, ka nke ahụ na-eme ka mpi ahụ dịkwuo njọ. N'iji ya tụnyere SARM ndị ọzọ nwere mmetụta dị ala androgenic, mmetụta YK-11 na-akpali akpali. Otu nnyocha sayensị kwubiri na mmetụta YK-11 (431579-34-9) nwere mmetụta dị na sel ahụ nwere nnọọ elu. Nsonaazụ gosiri na ọ bụ sel sel na-emepụta oghere anabolic mgbe e nyere 500nmol nke YK-11 ka e jiri ya tụnyere mgbe a na-enye testosterone.
Ọ bụ naanị ihe ziri ezi ikwubi na e mere YK-11 iji mee ka nkwalite ụzụ dị ka ndị SAR ndị ọzọ si n'ebe ahụ. Ọrụ YK-11 nke ọma ịkwalite uto mkpụrụ ndụ ọhụrụ, ọkpụkpụ ahụ, na njide ahụ mgbochi. Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ a nwere ike ịnweta uru ndị a nile n'enweghị ihe ga-eme ka nsogbu ndị isi ndị ọzọ na-akpata na ahịa pụta. Nke a bụ ma eleghị anya ihe mere YK-11 ji na-eto eto n'etiti bodybuilders. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahọrọ onyinye nke na-egosipụta mmetụta dị mma dị na mọzụlụ ma na ole na ole ka enwere mmetụta dị nfe.
YK-11 na-arụ ọrụ zuru oke maka ndị na-ezube iwukwasị muscle. Ozokwa, ọ dị mma maka onye na-arụ ọrụ nke na-achọ ịnọgide na-emezi ahụ ike mgbe ọ gbasịrị mgbatị na belata àgwà nke uru ndị a mgbe ọ na-edebe abụba abụba na nlele. Sarm RAD140 (Testolone) Onye ọrụ gwara ya: Nyocha, Jiri usoro, Ihe ize ndụ
Testosterone bụ otu n'ime hormonụ dị mkpa e mepụtara ma jiri ya mee ihe n'ime usoro ahụ. Ọ na-arụ ọrụ abụọ dị mkpa; dị ka steroid na-anabolic na dị ka ihe na-emetụta agụụ mmekọahụ. A na-ewepụta testosterone dị na ahụ, site na ịṅụ ọgwụ, mgbe ọ bụla obere testosterone dị. Ndi mmadu choro ka ndi mmadu nwekwuo ike, ike ndi mmadu nwere ike ime ka ha ghara inwe ike na-eji testosterone eme ihe ebe obu na o nwere mmetuta yiri nke ndi ogwu.
Testosterone na SARM YK-11 bụ otu maka ọrụ na usoro. Nanị ọdịiche dị ịrịba ama bụ na testosterone na-aga ọtụtụ mkpụrụ ndụ ahụ mgbe YK-11 na-ahọrọ na mkpụrụ ndụ ọ na-arụ. Mmetụta dị elu nke testosterone n'ime usoro ahụ dị egwu ma nwee ike ibute ọnọdụ ahụike na-adịghị mma dị ka ịba ọta prostate. Ndị ọrụ kwesịrị ịghara ịgba testosterone maka ogologo oge. Uru nke hormone a nwere ike inye bụ ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere nsogbu kpatara mgbe a na-elekọta ya n'ụba.
A na-ahụ ntu na spikes n'ime ọbara mgbe ọ bụla a na-elekọta testosterone n'ime ahụ, site na ogwu. Ihe YK-11 dị iche. Ọ na-eme ihe dị iche iche nke anụ ahụ, ya mere mmegharị na mmetụta ndị dị na ya bụ ihe na-enweghị isi. N'otu aka ahụ, YK-11 na-eji okwu ọnụ eme ihe n'ụzọ dị mma ma dị mma ma e jiri ya tụnyere ịmịnye testosterone.
Nyocha na YK-11 nyocha gosipụtara na SARM adịghị mma maka iji tụnyere testosterone. Otú ọ dị, nke a ekwesịghị ịpụta na ndị ọrụ ekwesịghị ịdị na-eme ihe n'ókè mgbe ha na-enye YK-11 usoro. Ntuziaka na usoro onu ogwu di iche iche kwesiri ka agbaso. Nnukwu ihe dị elu nke SARM nwere ike ime ka mmebi imeju na belata obere mmetụta ndị na-eso ya. Otú ọ dị, ndị na-arụ ọrụ n'ahụ nwere ike iji ya mee ka oge ruru oge iji kpalite ahụ ike.
Ịgba ụkwụ testosterone na-emetụta mmetụta ndị dị ka ọnyá ọbara, nsogbu ihi ụra, otutu ma ọ bụ ọbụna strok. Ihe mmetụta YK-11 abaghị uru; ụfọdụ ndị ọrụ anaghị ahụ. Ya mere, YK-11 bụ ọgwụ na-eme ka mma na-eme ka ọ dị elu, na-eme ka uru ahụ dị elu, ike akpụkpọ ụkwụ na-enye ezigbo ahụ anya.
Uru YK-11 dị oke mkpa karịsịa mgbe a na-eji ezi usoro ọgwụgwọ eme ihe. Ozokwa, abughi uru ndi ozo di ka o di mgbe o na-eji ndi ozo ndi ozo. Uru gụnyere;
Ike aka ike
A chọpụtaghị YK-11 ogologo oge gara aga, ma ọ dị mma na-eme ka ahụ ike nke onye ọrụ. Otu akụkọ site na Kanno gosiri na mkpụrụ ndụ ahụ nwere ike igosi YK-11 nwere mmetụta anabolic dị elu ma e jiri ya tụnyere sel ahụ nwere ike igosi DHT. Ọtụtụ nchọpụta egosila na nke a bụ ihe zuru okè maka akwara mgbochi dị mma maka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu. Ọ na-eme nke a site n'ime ka mkpụrụ ndụ ahụ nwee ọnyá ma na-akpali ha ka ha mepụta ọtụtụ ihe na-adịghị mma.
YK-11 na-ahọrọ na mkpụrụ ndụ ọ na-arụ ọrụ si otú a na-arụpụta ọrụ ya dị mma. Naanị ọ na - emetụta ọrụ anabolic nke sel ndị nwere ike iji kpalite uto ahụ na - enweghị mmetụ mmetụta nke YK-11 estrogenic ọ bụla. Semaglutide mmetụta naanị dị ka Peptide? Ee, Ọtụtụ Karịa Nke Ahụ!
Ọzọkwa, SARM YK-11 adịghị agbanwe usoro na arụ ọrụ nke mkpụrụ ndụ ihe nketa ndị ọzọ. Ọ naghị egbochi ndị na-anabata etrogen ndị dị na nkwonkwo, prostate, ọkpụkpụ na akụkụ ndị ọzọ. Ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ niile na-arụ ọrụ ahụ ike n'enweghị nsogbu ndị na-akpata site na iji ụdị steroid.
Uru ndị ọzọ gụnyere;
Mee ka abụba dị ọkụ
Ike ka mma
Enweghi njigide mmiri
Ịrụ ọrụ ahụ mgbe okirikiri
Nwee ọsọ na ike
Mmebawanye na libido
Nke kachasị mkpa, ọ dị mma ịmara na usoro nhazi usoro YK-11 ize ndụ ọkwa. Ịba ụba usoro onunu ogwu ga - eme ka o nwekwuo ohere inweta mmetụta ndi ozo. N'ịbụ onye siri ike SARM, enwere ike inwe ndị ọrụ nwere ike iche mmetụta ụfọdụ dị ntakịrị. Ha gụnyere;
Nke a nwere ike ịbụ mmetụta dị njọ ma ọ bụ dị mma. Ndị na-achọ ịkwalite ntutu isi agaghị enwe nsogbu na arụmọrụ YK-11 a. Otú ọ dị, ndị na-enweghị mmasị n'ịgba ntutu na-ebuwanye ibu nwere ike ihichapụ ntutu ọsọ ọsọ ka ha na-enwe uru uru uru ahụ. Ọzọkwa, ụfọdụ steroid na-akpata ntutu isi mgbe a na-ewe ha ruo ogologo oge. Ya mere ndị ọrụ nwere ike, jiri YK-11 dozie nsogbu nsogbu ntutu.
Mmetụta na prostate
YK -11 anaghị ebute mmetụta nke androgenic ka ọ ghara imetụta prostate. A maara ndị steroid ọzọ ka ha mụbaa prostate, mana nke a abụghị ikpe maka YK-11. Ndị mmadụ nwere ike iji ya na-enweghị nchegbu maka ịbawanye ọbara prostate na nsogbu ndị na-eso.
Ruo ugbu a, ọ dịghị akụkọ gbasara YK-11 nkwado. Ndị ọrụ nwere ike ịkwụsị iji ọgwụ a eme ihe n'ụzọ dị nro ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụghị nha utịp.
Ndị ọrụ kwesịrị iji ụbụrụ a tụrụ aro ma zere iji ọgwụ a eme ihe n'ụzọ ọ bụla. Ebumnuche bụ, a chọpụtabeghị mmetụta dị ogologo nke mmetụta dị elu nke YK-11.
Ihe ndị ọzọ metụtara nsogbu gụnyere;
Mmegide ka ukwuu
Ọ bụ ezie na mmeri adịghị emetụta ahụ, ọ ghaghị ịchịkwa ya. Ndị ọrụ na-enwe mmetụta a kwesịrị ịdalata nkwụsị ha. Ndị na-eji usoro ọgwụgwọ ziri ezi agaghị enwe nsogbu a.
Nke a na-emekarị n'etiti ndị ọrụ testosterone. Enweghi mmụba dị ịrịba ama nke ara nke ndị ọrụ YK-11 kwuru; ma nwanyi ma nwoke. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-akọ na ọ bụ obere mgbanwe ma gbanwee obi mgbe ha jiri onyinye a ruo ogologo oge.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ nwere mmetụta ọjọọ YK-11, ha kwesịrị ịkwụsị iji onyinye a ozugbo. Ọzọkwa, ha ga-eleta dọkịta maka nyocha na ọgwụgwọ ọzọ.
Ejiri SARM a iji mee ka nkwalite mpi dịkwuo elu. YN-11 na-arụ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche iji kpalite ịmalite na ịkwado nke uru ahụ. Ọ na-enyekwa aka na abụba ndị na-ere ọkụ ma na-ebelata abụba ndị dị oke ike na-echekwa n'ime ahụ.
Mgbe a na-ekpughere mkpụrụ ndụ ahụ, YK-11 na-eme ka usoro ịmalite ịzụ ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-ewusi ahụ ike na-agbanye ume. Dịka a tụlere na mbụ, SARM a na-ahọrọ ma na-arụ ọrụ na mkpụrụ ndụ kpọmkwem ka ọ na - enye nsonaazụ kachasị elu n'oge obere oge ojiji.
Ụfọdụ ndị nwere mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ nke na-akwadoghị mgbochi ahụ. YK-11 (431579-34-9) na-enyere ndị dị otú ahụ aka n'ụzọ dị egwu. Nke a ga-ekwe omume ebe ọ bụ na YK-11 bụ onye na-emechi ihe mgbochi. Ụfọdụ ndị nwere nnukwu ncheta nke myostatin, protein nke na-egbochi ịkwa ahụ, n'ime ahụ ha. Ndị dị otú ahụ adịghị ewuli ahụ ike ọbụna site n'enyemaka ọgwụ ọjọọ. N'ụzọ dị nro, YK-11 na-enyere aka belata ogo nke myostatin n'ime ahụ si otú ahụ na-ebelata mgbidi nke ikuku ahụ.
7. Onye nwere ike iji YK-11?
Onye ọ bụla nke nwere ike ịmalite ịzụlite ahụ ike nwere ike iji onyinye a. Ọ bụ ezie na a na-ewere KY 11 dịka SARM na-adịghị ize ndụ, a na-adụ ndị nwere ọnọdụ ahụike ikeike dị iche iche iji jiri ya mgbe dọkịta na-enye ha ihe aga n'ihu. Onye ọkachamara na ahụike maara otú YK-11 si arụ ọrụ na mmetụta ọ nwere ike ịnweta na ọgwụ a na-enye iji jikwa ọnọdụ ahụike.
YK-11 adịghị akpali testosterone na ọkwa na-adịghị mma. N'okwu a, ndị inyom nwere ike iji ụlọ ọrụ a n'enweghị ụjọ maka ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ime ihe na nsogbu ndị ọzọ. Otú ọ dị, ndị inyom kwesịrị ịdị ala YK-11 usoro ogwu karịa ụmụ nwoke.
Onye na-arụ ọrụ nke na-enye SARM dị iche nwere ike ịgbanwe na YK-11 maka ihe kpatara ya. Nke mbụ, ọ nwere ike, na mmetụta ya na-eche n'ime oge dị mkpirikpi. Nke abuo, ojiji ya ejighi emetuta nsogbu ndi ozo. YK-11 na-enye ahụ ike dị mma ịmepụta ngwọta maka onye ọ bụla. Otu otu dose YK-11 na-enye nsonaazụ kachasị mma ma e jiri ya tụnyere SARM ndị ọzọ (ọtụtụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) Ostarine na Lgd 4033.
Maka nsonaazụ dị elu karị, ndị ọrụ kwesịrị itinye aka na mmega ahụ mgbe niile ma nọgide na-arụsi ọrụ ike. Mmetụta nke onyinye a nwere ike ịdị iche site n'otu onye gaa na onye ọzọ ebe ọ bụ na ozu dị iche. Otú ọ dị, nsonaazụ ga-akọwa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-ewe ihe ndị a tụrụ aro ma nọgide na-arụsi ọrụ ike iji belata uto na mmepe nke uru.
8. Nke kacha mma YK-11 usoro ogwu
O siri ike ịgwa YK-11 usoro kachasị mma. Ọtụtụ ndị na-eme atụmatụ na-atụ aro ihe dị n'etiti 5mg na 10mg kwa ụbọchị. A naghị atụ aro ọgwụgwọ 15 mg ma ọ bụ ọbụna karịa karịa, na-atụle na ogo dị elu bụ ogwugwo inwe mmetụta dị egwu. N'ọnọdụ ọ bụla, mmetụta ọ na-enwe mgbe ị na-eji usoro 10mg ga-adị ka ndị ahụ chere mgbe ị na-eji usoro 15mg.
Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ ụfọdụ na-akọ na ha ejiriwo doso YK-11 dị elu na-enweghị nsogbu ndị ọzọ. Nke a ga-ekwe omume kemgbe, dịka e kwuru na mbụ, ahụ anyị dị iche. Ndị ọrụ ndị ọzọ na-eji YK-11 n'akụkụ SARM ndị ọzọ na nsonaazụ ọma aha. Otú ọ dị, echiche a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka ọtụtụ ndị mmadụ adịghị atụ aro.
A na-eji nyocha ndị ọkachamara YK-11 mee ihe iji chọpụta ihe kachasị mma. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ikpokọta ihe ọmụma si na nyocha ndị a ma ọ bụ chọpụta ihe kachasị mma maka ha site na ịnwale. Nootropic Isi Iyi Bromantane: Nyocha, Mmetụta, Ụdị
Ọdịdị YK-11 ọ bụla karịa 5mg kwa ụbọchị ga-eme ka ọ ghara ịbịpụta ihe ọ bụla. Ngwá usoro 10mg kwa ụbọchị ga-akwalite mmepụta ahụ na obere oge. Iji zere ihe ize ndụ, ndị mbido kwesịrị iji obere dosages nyochaa otú ahụ ha si emeghachi ma eleghị anya mee ka usoro onyonyo jiri oge na-adabere na nchọpụta ha.
E nwere obere ihe ọmụma sayensị dị YK-11 ọkara ndụ. Dika ihe omumu banyere ihe omuma, onu ogugu nke uzo a di mkpirikpi. Nke a pụtara na ọ ga-ewe ọtụtụ ugboro n'ụbọchị maka nsonaazụ kacha mma.
Ntughari otutu nke YK-11 kwadoro na ogo nke onyinye a na-anọgide na-arụ ọrụ n'ime usoro ahụ. Nke a na-arụpụta mmezu niile n'oge usoro okirikiri YK-11. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-emepụta ihe na-eme atụmatụ maka inye 10mg dose kwa ụbọchị, ọ ga-enye 5mg ọrụ n'oge ụtụtụ na ihe fọdụrụ na 5mg n'oge mgbede.
10. Kedu ihe a YK-11 Mgbanwe okirikiri dị ka?
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke usoro YK-11 nkịtị;
5mg kwa ụbọchị kwa izu isii
10mg- 15mg kwa ụbọchị kwa izu asatọ
Ndị ọrụ ndị ọhụrụ na YK-11 na-ejikarị ụzọ mbu. O nwekwara ike ịchọta ndị na-ebido na-eji usoro onyonyo dị elu na nke mbụ. A gaghị atụ aro nke a.
Ndị ọrụ ahụmahụ ga-aga maka mgbakọ YK-11 nke abụọ. Ogologo oge mgbagwoju anya di ogologo ma jiri onodi ozo di elu.
YK-11 nchịkọta anaghị atụ aro ya. Ndị ọrụ ekwesịghị iji ụlọ a n'akụkụ ogige ndị ọzọ.
11. YK-11 pụta
SARM YK-11 results dị oke. Mmetụta anabolic ya na ọkpụkpụ na ọkpụkpụ ahụ dị oke mma. Site na nchọpụta dị omimi nke mbụ na mgbe ọ dịchara anya nke onye ọrụ SARM, ọ dị mfe ịhụ na YK-11 na-enye nsonaazụ dị mma karịa SARM ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi na YK-11 (431579-34-9) bụ SARM kachasị mma n'ahịa.
Inweta 10lbs nke uru na-emekarị abụghị ọrụ dị mfe. Otú ọ dị, bodybuilders nwere ike inweta 10lbs n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla na usoro YK-11. Ndị ọrụ ekwupụtakwala uru ọhụụ na-enweta mgbe ha nọ na usoro YK-11. Ike na-eme ka ọ dịkwuo ụbụrụ na-eme ka ọ dịkwuo ọkụ n'ihi na a na-ebuwanye ibu. Site na usoro ntinye kachasị elu nke 5mg kwa ụbọchị, ndị ọrụ na-ekwu na ha na-enwe mgbanwe dị ukwuu.
Ezi nri na mmega ahụ mgbe niile na-ekpebi ihe ị ga-eme YK-11. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iri nri dị mma ma rụọ ọrụ ugboro ugboro ọbụna tupu ịmalite mgbanaka YK-11.
"M na-eji 5mg kwa ụbọchị kwa ụbọchị YK-11 n'oge izu isii n'izu m. M na-eji usoro onu ogugu mee ihe iji lelee otu esi eme ihe a na ahu m. N'ụzọ dị mwute, ihe niile gara nke ọma, ihe ndị a rụpụtara dị ịrịba ama. N'izu nke anọ, enweelarị m ụfọdụ ngwakọta muscle ma tụfuo abụba. Enwere m mmasị na nri m ma họrọ onye nwere calorie ole na ole. M na-arụsi ọrụ ike ma na-etinye aka na mmega ahụ. YK-11 bụ SARM ọhụrụ m kachasị mma; ma ọ dịghị ihe ọzọ, anaghị m eche banyere nsogbu ndị mgbu ahụ m mere tupu m chọpụta onyinye a pụrụ iche. "
"Enwetara m 5.2 pound of muscle mass ma funahụ 3% abụba mgbe ị na-agba YK-11 maka izu isii. Ọzọkwa, enwere m ume dị ukwuu ma jisie ike ibuli ibu arọ. N'ezie, YK-11 bụ SARM kasị mma na ahịa. M zụtara nke a site na Phcooker.com dị nnọọ mma; ngwugwu ahụ bụ ihe niile m rịọrọ. A sị na ọ bụrụ na m nọgidere na-arụsi ọrụ ike ma nyochaa ihe oriri m, enwere m ọbụna mmetụta siri ike ma rụpụta ya. N'ikpeazụ, ihe ndị na - arụpụta na njedebe nke usoro ahụ na - enye afọ ojuju. Achọrọ m ịnọgide na-eji ya na m SARM ahụ na-arụ ọrụ cycles. Ndị na-arụ ọrụ ụlọ kwesịrị ịzụta SARM YK-11 Phcooker.com; ha kwesiri ntukwasi obi. "
13. YK-11 tupu na mgbe ejiri ya
Ndị a tupu mgbe foto gosipụtara n'elu dị nnọọ mma. Ha na-egosi n'ụzọ doro anya otú ike YK-11 si dị ike. E jidere foto dị n'aka ekpe tupu e gosipụta onye ahụ na YK-11 usoro. Enwere foto nke abụọ izu anọ mgbe ọ gasịrị SARM YK-11 okirikiri.
O doro anya na onye ọrụ ahụ nwere nnukwu ihe dị n'ime oge dị mkpirikpi. Foto a na-enwe ọganihu na-enye echiche nke ihe bodybuilders nwere ike ịtụ anya site na ịhazi YK-11. Ọ dịkwa mma ịmara na ọ bụ onye ahụ na-ahụ nri dị mma ma zụọ ya mgbe niile. Nke a na-akwado mmetụta YK-11 iji nye nsonaazụ kacha mma.
A na-ere YK-11 na ụlọ ọgwụ na ụlọ ahịa ahụike n'ọtụtụ mba. Ndị ọrụ nwere ike ịzụta zụrụ ahịa na ụlọ ahịa ndị a ma ọ bụ nwee ike ịhọrọ ịchọta iwu online. Otú ọ dị, ndị na-azụ ahịa kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-azụ ihe; ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji mepụta nlele ndabere nke soplaja iji nyochaa njide ha. Nke a bụ naanị ụzọ ị ga-esi jide n'aka na ị ga-enweta ngwaahịa na-ezighị ezi nke a na-enye gị. A na-enwe ngwaahịa ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ahịa. N'okwu ndị a, ndị ọrụ kwesịrị ịgba mbọ ka ha zụta SARM YK-11 mbụ.
Ọ bụghị "YK-11 maka ire ere"Post online bụ ezigbo. Ndị ọrụ kwesịrị ịlele nyocha ndị na-azụ ahịa na soplaya na ngwaahịa ahụ na-enye tupu ịme iwu ọ bụla. Ebe ọ bụ na a na-ewere YK-11 kwa ụbọchị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji hụ na ịzụta otu onyinye ga-enye nsonaazụ ọchụchọ ma dị mma maka ojiji. Ndị na-arụ ụlọ nwere ike iji ọnụ ahịa tụnyere ọnụ ahịa ma eleghị anya gaa maka ngwugwu dị ọnụ ala. Otú ọ dị, mgbe ọnụ ala dị oke ọnụ.
N'ihi ọtụtụ arụmụka banyere àgwà na ntụkwasị obi nke ndị na-azụ ahịa na ngwaahịa ahụ, ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụta SARM YK-11 online site na Phcooker.com. Anyị na-enye SARM mbụ na nke dị elu na ọnụahịa kacha mma.
Dịka ọmụmaatụ nke a tụlere n'elu, o doro anya na YK-11 nọ n'elu ndepụta kachasị mma SARM. Nyocha na YK-11 nyocha egosiwo na ọ na-eme ka mmepe na uto nke ụbụrụ na-adịru n'ime oge dị mkpirikpi. Ọzọkwa, ọ bụ ngwaahịa dị mma nke mmadụ niile nwere ahụ ike nwere ike inye. YK-11 na-ahọpụta na-emetụta mkpụrụ ndụ kpọmkwem. Ejiji ya ejighi ihe mmetụta ọjọọ.
Ndị ọrụ na-ejighị n'aka ma ọ bụrụ na onyinye a dị mma maka ha ka ha gakwuru onye na-enye ọzụzụ ma ọ bụ dọkịta tupu ewere ihe ọ bụla. YK-11 reviews enwere ike inweta enyemaka dị ukwuu maka ndị ọhụrụ. Ha ga-ezukọtakwu ihe ọmụma banyere ngwaahịa ahụ na ihe ga-esi na-atụ anya ya.
A ga-adụ ndị mmadụ nọ na ndị ọzọ na-edozi ma hà ga-eji onyinye ahụ ma ọ bụ site n'aka dọkịta. Iji zere ihe ize ndụ, ndị mmadụ ekwesịghị ịnara nchịkọta YK-11 kama jiri ya na ya. Ọ bụrụ na enwere mmetụta dị oke njọ, onye ọrụ kwesịrị ịkwụsị usoro YK-11 ozugbo.
Thevis, M., Piper, T., Dib, J., Lagojda, A., Kühne, D., Packschies, L., ... & Schänzer, W. (2017). Ụdị njirimara spectrometric nke onye na-ahọrọ na androgen receptor modulator (SARM) YK-11 maka njedebe njedebe doping. Rapid Communications na Mass Spectrometry, 31(14), 1175-1183.
Kanno, Y., Ota, R., Someya, K., Kusakabe, T., Kato, K., & Inouye, Y. (2013). Onye na-anabata ihe na-emepụta androgen receptor, YK11, na-achịkwa myogenic ọdịiche nke C2C12 myoblasts site na okwu follistatin. Akwukwo ndu na nyocha, 36(9), 1460-1465.
Piper, T., Dib, J., Putz, M., Fusshöller, G., Pop, V., Lagojda, A., ... & Thevis, M. (2018). Ihe omumu banyere omimi nke SARM Y1K11: Ama na njirimara nke metabolites nwere ike bara uru maka njigide doping. Ọgwụ nyocha na nyocha, 10(11-12), 1646-1656.
Ọ dị mma ịmara ịma ọnụahịa ntakịrị ntakịrị nke IGF1 DES, HGH191AA, MK2866 na YK-11. regeads kacha mma, okamoto
Ọ dị mma, anyị ga-eji email zitere gị.